Koorsada luqadda iyo qiimaha iskuulka ee Jarmalka
Baaritaankan, waxaan isku dayi doonaa inaan ku siino macluumaad ku saabsan qiimaha iskuulka luuqada ama koorsooyinka luuqada ee Jarmalka. Jarmalka waxaa ku yaal iskuulo luuqado iyo jaamacado badan oo aad wax ku baran karto.
Markaad eegto guud ahaan Yurub, magaalooyinka Jarmalka waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu horeeya ee kuwa doonaya inay bartaan Jarmalka, maadaama Jarmalku yahay afka hooyo waana meesha looga hadlo inta badan. Markaan eegno magaalooyinka Jarmalka ee doorbidaya barashada luuqada Jarmalka, waxaa soo muuqda Berlin, Constance, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Cologne, Munich iyo Radolfzell. Muddada, tayada waxbarashada iyo ujrada laga rabo iskuul kasta oo magaalooyinkan kuyaala way kaladuwan yihiin. Waxaan isku dayi doonaa inaan ku siino macluumaad ku saabsan qiimaha qiyaasta miiska aan ku qori doonno hoosta cinwaanka Qiimaha Dugsiga Luqadda Jarmalka 2018.
Ardayda doonaya inay ku bartaan luqad ajnabi ah Jarmalka waxay u baahan yihiin inay sameeyaan cilmi baaris wanaagsan ama ay la xiriiraan hay'adda dhexdhexaadineysa shaqooyinkan si ay u helaan iskuul luqadeed oo leh tayo ku habboon oo qiimo jaban leh. Ardaydu waa inay marka hore go'aamiyaan qaybta Jarmalka ee ay doonayaan inay wax ku bartaan. Iskuulada luuqada, kala soocida waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo kala soocidan.
Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah iskuulada luqadaha Jarmalka iyo qiimahooda hoos. Ku jira miiska qiimaha Euros lagu muujiyey shuruudaha.
Qiimaha, hoyga iyo ujrooyinka kale ee iskuulada luqadaha ee magaalada Berlin.
BERLIN DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
4 toddobaad 6 toddobaad 8 toddobaad 10 toddobaad 12 toddobaad 24 toddobaad Guriga Yurt record con. Res
MA QABTAY DEUTSCH 24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00
YURUB-YAR 20 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 3.024,00 319,00 220,00 110,00 60,00
Qiimaha, hoyga iyo ujrooyinka kale ee loogu talagalay iskuulada luqadaha ee ku yaal magaalada Constance.
XIRIIRKA DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
HUMBOLDT MACHADKA 30 3.060,00 4.590,00 6.120,00 7.650,00 9.180,00 18.360,00 lugu daro - - -
Qiimayaasha, hoyga iyo khidmadaha kale ee iskuulada luqadaha ku yaal Frankfurt.
FRANKFURT DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
MA QABTAY DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00
Qiimaha, hoyga iyo khidmadaha kale ee iskuulada luqadeed ee Heidelberg.
HEIDELBERG DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
Aqalka Caalamiga ah 20 720,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 1.920,00 3.840,00
Qiimaha, hoyga iyo khidmadaha kale ee iskuulada luqadaha ku yaal Hamburg.
HAMBURG DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
MA QABTAY DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 260,00
Qiimaha, hoyga iyo ajuurada kale ee laga qaado iskuulada luuqadaha ee magaalada Kologne.
COLOGNE DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
Qiimayaasha, hoyga iyo khidmadaha kale ee iskuulada luuqadaha ee Munich.
MUNICH DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale
MA QABTAY DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 260,00
Qiimaha iskuulada luuqada, hoyga iyo ajuurada kale ee Radolfzell.
RADOLFZELL DUGSIGA Koorsooyinka Toddobaadlaha ah Muddada / Qiimaha Hoyga Toddobaadlaha ah Kharashyada Kale